Linus Torvalds mitsikera ny Paragon Software ary amin'ny dingan'ny GitHub dia miteraka fanakambanana tsy ilaina | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 08/09/2021 11:54 | Nohavaozina amin'ny 09/09/2021 01:54 | About us
Niandry i Linus Torvalds nandritra ny fotoana ela mba manana Paragon Software mandefa ny mpamiliny NTFS hanampy amin'ny kernel Linux ary efa vita io ary Torvalds dia nanambatra ny mpamily vaovao tamin'ny loharano kernel Linux 5.15.
Saingy talohan'izay dia nitaraina momba ny fampiasana ny endri-fangatahana fitambaran'i GitHub izy ao amin'ny lahatsoratra, milaza fa GitHub "dia mamorona fanakambanana tsy ilaina mihitsy." Toa tsy dia tian'ny mpamorona ny kernel Linux ny fampifangaroana GitHub, raha manao izany izy ireo. Ary koa, ny fampitandremana amin'ny mpanangom-bokatra dia raisina ho lesoka tsy misy fotony amin'ny fananganana kernel.
Tamin'ny fiandohan'ny volana aogositra, Torvalds dia nanery ny Paragon Software hanao ilay fangatahana hisintona»Fandefasana kaody tena izy izay hiaraka amin'ireo loharano kernel, amin'izay ny mpamaky NTFS mamaky / manoratra dia azo ampidirina ao amin'ny kinova 5.15 manaraka, izay misokatra ny varavarankely manambatra.
Paragon dia nanolotra ny "fangatahana fisintahana", tamin'ny filazany fa:
"Ny kinova ankehitriny dia miasa amin'ny fisie normal / compressed / spars ary manohana ny playback acl sy NTFS log." Izany dia nilaza fa ny orinasa dia mbola mahalala tsara ny fizotran'ny fandefasana, ary Torvalds dia nanana fanehoan-kevitra vitsivitsy, miaraka amin'ny fikasana hanatsara ny fangatahana fisarihana amin'ny ho avy. Voalohany indrindra, nilaza ny mpamorona ny kernel Linux fa tokony natao sonia ny fangatahana fisarihana. "Ao anatin'ny tontolo tonga lafatra, izany dia mety ho soniavin'ny PGP azoko soratana mivantana aminao amin'ny alàlan'ny rojom-pitokisana, saingy tsy nitaky izany velively aho," hoy izy.
avy eo nahatsikaritra fa ny kaody ao amin'ny fangatahana fisarihana dia misy fanoloran-tena fampifangaroana natao tamin'ny UI tranokala GitHub.
"Iray amin'ireo zavatra tsy tena tadiaviko * mihitsy ny * mahita izany: GitHub dia mamorona fanakambanana tsy ilaina ary tsy tokony hampiasa interface-vava GitHub mihitsy ianao hanambatra na inona na inona." Ny fampitambarana dia tsy iray amin'ireo zavatra ireo. Taloha, indrindra tamin'ny 2012, Torvalds dia nitaraina momba ny lafiny sasany amin'ny GitHub.
"Tsy manao fangatahana fisarihana GitHub aho. GitHub dia manary ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'izany, toy ny fananana adiresy mailaka mety ho an'ilay olona manao fangatahana fisintomana. Tsy ampy sy tsy ilaina koa ny diffstat », hoy izy tamin'io fotoana io. Mariho fa ny baikon'ny fangatahana fitakiana git dia hafa noho ny fiasa fangatahana fisintomana avy amin'ny GitHub. Ary koa, ny tahiry Paragon dia manana hafatra tsy ampy fampahalalana, toy ny »Mampitambatra ny« torvalds: master »ho master«. Raha niresaka momba izany i Torvalds dia nilaza tamin'ny sabotsy fa "ny kernel Linux dia tsy maintsy atao * tsara *."
Ankoatry ny manampy ny mpanara-maso Paragon NTFS mankany Linux kernel 5.15, Torvalds koa dia namela ny safidy fananganana "-Werror", izay ny toerana misy anao ho an'ny fananganana kernel rehetra.
Ny sainam-panangonana »-Werror«raiso ho fampandrenesana diso daholo ny fampitandremana rehetra. Amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fampitandremana rehetra ho lesoka, ny Torvalds dia manery ireo mpamorona mba hiantoka fa ny fampitandremana izay mety tsy ho voamariky ny mpamorona dia tsy maintsy ho laharam-pahamehana ankehitriny rehefa manelingelina ny fizotran'ny fananganana izy ireo.
Torvalds naneho hevitra momba ny fanovana fa tena tokony hanana fananganana madio foana isika ary tsy hampaninona anay ny fampitandremana manokana tafahoatra raha ilaina izany, raha tsy afaka manamboatra azy ireo izahay. Nefa na dia ampihariko amin'ny hazo ity aza aho, ny robots fananganana isan-karazany izay tsy milaza ny fampitandremana dia tsia.
Hamarino tsara fa tsara ny fampitandremana, fa ny ankamaroan'ireo tetikasa ireo dia tsy ny haben'ny kernel Linux. Etsy ankilany, WERROR ho switch Kconfig. Io no hamafana ny saina »-Werror» raha toa ka mampiditra fampitandremana vaovao ny kinova vaovao momba ny mpamorona izay tsy afaka manitsy avy hatrany ny kernel na olana hafa mifantina izay tsy azo atao ny mamorona kernel raha tsy misy fampitandremana. Ny safidy WERROR dia alefa amin'ny alàlan'ny default ho an'ny fananganana kernel rehetra.
Nahavita ny hafatra i Linus ny patch miaraka amin'ny:
"Enga anie izany dia hidika fa handray fangatahana fisarihana vitsy kokoa izay misy fampitandremana vaovao izay tsy tsikaritr'ireo fiara samihafa nampiharintsika." Mandondona amin'ny hazo aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Linus Torvalds mitsikera ny Paragon Software ary amin'ny dingan'ny GitHub dia miteraka fanakambanana tsy ilaina
GitHub dia nanolotra fepetra vaovao momba ny fifandraisana Git lavitra